Maraykanka oo $ 705 Malyuun oo taageero militari ah siinaya Israel – Kasmo Newspaper
Maraykanka oo $ 705 Malyuun oo taageero militari ah siinaya Israel
Updated - March 28, 2018 1:38 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Maraykanka ayaa ku kordhisay $ 148 malyuun oo Dollar miisaaniyaddii barnaamijyada Difaaca Gantaallada Israel, si loogu soo daro noocyada Iron Dome iyo Arrow-3.
Taas oo isu gaynta guud ee lacagaha ku baxa taageerada military ee Israel la siiyo ka dhigaysa $ 705 malyuun oo Dollar, sannadka 2018ka. Wasiirka Gaashaandhigga Israel Avigdor Lieberman ayaa maalintii Isniinta, 26 March, rasmi ahaan uga mahadceliyay Washington, taageeradeeda maaliyadeed.
Sida Wasiirku caddeeyay kordhinta tageerada military waxaa loo codsaday sidii loo farsamayn lahaa hannaanka Difaaca Gantaallada Irone Dome, David’s Sling iyo Arrow-3. Hannaankan 3da nooc ah waxay Israel u samaynayaan dallad ka badbaadisa halista gantaallada riddada gaaban iyo dhexe ee Xisbullah uga soo riddo Gaza iyo kuwa riddada dheer ee Iiraan haysato.
Nooca Irone Dome wuxuu ka samaysanyahay qubbado bir ah oo qayb ka ah hannaan difaac oo ay farsamayso Shirkadda ‘Rafael Advanced Defence Systems) ee Israel. Arrow-3 waa hannaan difaaca gantaallada oo horumarsan, awoodna u leh in uu gantaallada riddada dheer uga hortago meel ka baxsan hawada sare ee dhulka.
Sannad kasta, Maraykanku,wuxuu Israel ku bixiyaa $ 3,1 bilyan oo Dollar oo taageero military ah, sida uu qabo heshiis ay wada saxiixdeen sannadkii 2009kii.
14kii September 2016, 2da dal waxay wada galeen heshiis cusub oo Washington ku siinayso Tel Aviv adduun gaaraya $ 38 bilyan oo Dollar, muddo 10 sano ah, laakiin sida Washingto Post xusayo miisaaniyaddan $ 705ta Malyuun ah waa ku talagal gooni ah oo ka baxsan heshiiskaas.
22kii March, Madaxweyne Trump iyo Xoghayihiisa Difaaca, Mattis, waxay saxiixeen sharci cusub oo miisaaniyadda 2018ka xukuumadda u oggolaanaya $ 700 oo bilyan dhanka difaaca, taas oo $60 bilyan dheer middii 2017kii.